Amahemuhemu nge-iPad Pro entsha entwasahlobo ka-2017 | Izindaba zamagajethi
Amahemuhemu nge-iPad Pro entsha entwasahlobo ka-2017
Amahemuhemu ngemikhiqizo ye-Apple awapheli futhi yize sisondele ekwethulweni okungaphezulu kokungenzeka kweMacBook Pro entsha ukuthi ngokwemithombo ekhethekile izofika kule nyanga, manje kunamahemuhemu avela kubhulogi laseJapan iMac Otakara, okwentwasahlobo ka-2017 entsha IPad Pro izokwethulwa. Empeleni, lokho okushiwo ngamahemuhemu ukuthi imithombo esondelene nenkampani iveze idatha kusuka kumamodeli amathathu e-iPad azokwengeza ukuthuthuka kanti izinhlobo ezintathu ze-iPad zizothola izipikha ezine ezinamamodeli we-Pro., Izinhlobo ze-7,9-inch iPad Pro mini zizofaka zonke izipikha ezine.
Ngaphezu kwalokhu kuthuthukiswa ku Amamodeli we-12,9 azothola iphaneli elithuthukisiwe ngokuhambisana nezinzwa zokukhanya zamanje eziningi ezizokuvumela ukuthi uguqule ithoni yombala nokuqina kokufana ngokuya ngokukhanya okukhona njengoba imodeli ye-9,7 Pro inanamuhla.Ngaphezu kwalokhu, ikhamera efanayo ibizothuthukiswa ize ifike ku-12 MP ungeza i-flash ye-LED kuwo wonke amamodeli afaka i-iPad mini. Kepha amahemuhemu awagcini lapha futhi kubonakala sengathi amamodeli we-Pro ye-7,9-intshi, okungukuthi, amamodeli amancane, azofaka i-flash ye-LED futhi izithuthukisi zesikrini.
Amahemuhemu aqhamuka kulokho okusho ukuthi, yize kuyiqiniso, ayinayo impumelelo ephezulu ekubikezelweni kwayo, yashaya uphawu ngokususwa kwejack ye-3,5mm kwi-iPhone entsha 7. Futhi njengoba sinojack 3,5 , XNUMXmm kumahedfoni, Ngokwalohemuhemu, amamodeli amathathu we-iPad Pro azofika ngeke alahlekelwe yisixhumi (kubukeka kungajwayelekile kimi). Lawa mahemuhemu engeze ezindabeni ezimbalwa ezikhishwe nguMac Otakara ezagcina ziyiqiniso zinikeze inani elengeziwe, kepha akudingeki ukuthi sithembe u-100% noma ngoba kungekudala behlulekile ezibikezelweni zabo zokwethulwa kweMacBook Air entsha .. .
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » I-Telephony » Tablets » Amahemuhemu nge-iPad Pro entsha entwasahlobo ka-2017
INokia D1C, i-smartphone ye-Android engene eGeekbench
I-iPhone 7 ne-iPhone 7 Plus ziqhume izinga le-AnTuTu